IGUMBI lokuthandana elinemizuzu eyi-5 elunxwem - I-Airbnb
IGUMBI lokuthandana elinemizuzu eyi-5 elunxwem
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguDaniela
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uDaniela iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Igumbi elizolileyo, elinebhedi elala abantu ababini, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, ikhabhathi, i-wifi. Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex ye-10, indawo yokujonga amahlathi, indawo ethe cwaka, abahlali abayi-2, indawo etofotofo, evulekileyo (130 m2), igesi eqaqambileyo nehonjiswe kakuhle. Isakhiwo esinomamkeli zindwendwe. Igumbi lamagumbi ayi-2, amagumbi okulala ayi-3 (kumntu ngamnye, umhlali oyi-1), ikhitshi elinebhalkhoni, igumbi lokuhlambela elikhulu eliyi-1 (elisetyenziswa nangabanye abantu) negumbi lokuhlambela eliyi-1. Iflethi eyi-5M ukusuka eCopacabana okanye eLeme Beach, i-10M yokuhamba ukuya eRiosul Yokuthenga, imizuzu eyi-7 yokuhamba ukuya kwisitishi esingaphantsi komhlaba kunye nemizuzu eyi-3 ukuya ebhasini.
Ukuhombisa kucocekile ibe kuyahambelana. Isakhiwo sigcinwe kakuhle, sikwindawo enelungelo kuba sisembindini kwaye sisezintabeni (akukho bahlali). Iflethi okanye indlu ekwicomplex ixhonywe ehlathini, nto leyo eyenza ibe nomtsalane kakhulu indalo.
42" HDTV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video
I-Copacabana yindawo enomtsalane, enezakhiwo ezindala, ezikhethiweyo, ezixakekileyo kunye nezitrato eziliqela ezinemithi kufutshane nehlathi, nto leyo eyenza kuthi cwaka. Unxweme luhle kwaye luyaziwa emhlabeni wonke. Isakhiwo siseCopa-Leme, esiyisiqalo seCopacabana, kufutshane nesithili saseLeme. Ukufikelela lula elunxwemeni, kwiibhari, kwisitishi esingaphantsi komhlaba, ibhasi, ukuthenga eRiosul, amayeza, iivenkile ezinkulu.
Ndiza kufumaneka nanini na kunokwenzeka ukunceda ngemibuzo malunga nendawo, ukusetyenziswa kweflethi okanye indlu ekwicomplex (i-intanethi, njl.), njl. Kwaye ukuze ube nencoko entle, yiba nomdla.